EPL: Manchester City oo sal dhigatay kaalinta saddexaad kaddib guul ay ka soo gaartay kooxda Southampton oo ay booqatay… + SAWIRRO – Gool FM
EPL: Manchester City oo sal dhigatay kaalinta saddexaad kaddib guul ay ka soo gaartay kooxda Southampton oo ay booqatay… + SAWIRRO
(Southampton) 15 Abriil 2017 – Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa soo degtay kaalinta saddexaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League kaddib guul wayn oo ay ka soo gaartay naadiga Southampton oo ay booqatay.
Man City ayaa kulankan ku adkaatay saddex gool oo ay u kala dhaliyeen saddex ciyaaryahan oo kala duwan, iyadoo kulankan qeybtii hore lagu kala nastay goolal la’aan 0-0.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta Man City ayaa goolka hore waxaa u dhaliyey 55’daqiiqo kaddib Vincent Kompany, kaddib markii uu madax la helay karoos uu koornada bidix ka soo qaaday David Silva, 1-0 ayaana lagu hoggaamiyey kooxda martida loo ahaa ee Southampton.
Man City ayaa markale goolka labaad ee ciyaarta la timid waxaana kubbad daba marayn ahayd oo uu helay Kevin de Bruyne 78’daqiiqo u soo dhigay Leroy Sane oo isna shabaqa ku hubsaday Man City ayaana kulanka ku gacan sarreysay 2-0.
Goolka saddexaad ee Man City waxaa u dhaliyey weeraryahankeeda Sergio Aguero, ciyaarta oo ay ka harsan tahay 10’daqiiqo, waxaana uu goolhaya Southampton daba mariyey madax qurux badan kaddib karoos gaaban oo uu ka helay 80’daqiiqo saaxiibkiis Kevin de Bruyne, Man City ayaana ku soo adkaatay 3-0.
Guushaan ayaa Man City uga dhigan inay soo degtay kaalinta saddexaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League iyadoo leh 64-dhibcood 32 kulan oo ay dheeshay inkastoo Liverpool oo habeen dambe ciyaaraysa kulankeedii 33-aad kuna jirta kaalinta afaraad ay leedahay 63-dhibcood.
GOOGOOSKA: Inter Milan vs AC Milan 2-2 (Derby della Madonnina oo mar kale kulan dab ah kusoo baxay)
DAAWO: ''Si wanaagsan ii caaya kalama jecli'' - Mario Balotelli oo ku camirtay taageerayaasha Inter Milan